Dubbi Himaan ABO, Jaal Battee Urgeessaa sirna harcaatuu durii Finfinnee maadheffatteen hidhamee jira. – Kichuu
Dubbi Himaan ABO, Jaal Battee Urgeessaa sirna harcaatuu durii Finfinnee maadheffatteen hidhamee jira.
Oromoon barii bilsummaa keessa jira. Sirni harcaatuu leellistoota durii boqonnaa xumuraa kanarratti nama hunda ciniinuuf yaaluun waanuma eegamuu dha!!
Abbaan Shira Oromoo Walloo irratti hojjachaa jiru saaxilameera..!!
Dammaqee Mokonnen fi President Naannoo Amaaraa wal ta’uun walloo irratti lolli akka labsamu godhuun isaanii beekkameera. Dammaqeef President Naannoo Amaaraa erga Finfinneetti dhooksaan wal mari’atanii booda walloon waraana liyyuu haylii Amaaraan akka weeraramtu walii galuun isaanii amma Odeeffannoon nu dhaqqabeera..!!
Odeeffannoo kana madda amanama irra arganne..!!
Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Mootummaa Federaalaa hatattamaan Lolli walloo irratti baname akka dhaabbatu godhuu qabu..!! Warra ummata nagaa irratti waraana labsu Mootummaan seeraaf dhiyeessu qaba..!!
Namni maxxansi kun bira ga’e waliif Dabarsaa Shira PP Amaaraa Fashaleessaa..!!
Loltoonni Tigraay kuma kudhan (10,000) Naannoo Amaaraa seenanii Faanoo fi “Fooxaa Labaashii” waraanaa jiru.
Nafxi Tola beektu itti muddaa!
Breaking news: More than 10,000 TDF fighters have entered the Amhara regional state.
Hub= Amaarri hinsobdii kanaaf gurra hinkenninaa” Suurri gaditti argitan kun ijoollee wallooti miti. Ammatti Naannoo Walloo mishingaan takkaahu midhaan maasii keessa hinjirtu, yeroonis reefu yeroo qonnaati.Lola deemaa oolerratti kan olaantummaa argateefi kaampii liyyuu haylii dhuunfatee warras keessaa ariyee meeshaa hunda fudhate qotee bulaa fi qeeyroo keenyadha.
ABO fii Dh.D.U.O'n : Araaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa